Garachico, voina ary fizahan-tany | Vaovao momba ny dia
Garachico, voina ary fizahan-tany
Mariela Carril | | mpitarika, Tenerife
Tenerife Iray amin'ireo nosy Canary izy, ny lehibe indrindra ary be mponina indrindra ao aminy. Eto, amoron-tsiraka, dia ny tanànan'i Garachico. Izy io dia tranokala mahafinaritra, miaraka amin'ireo tranobe taloha sy dobo voajanahary izay manintona mpizaha tany mankafy fandroana tsara.
Ny tantara dia nilaza fa indray andro tamin'ny 1706 dia nipoaka ny volkano Trevejo ary nandrava ny seranana, ny zava-dehibe indrindra teo amin'ny nosy teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX, ny firaisana teo amin'i Amerika sy Eropa. Nifarana ny vanim-potoana volamena tao an-tanàna, saingy hisy dingana hafa hanomboka taty aoriana ary androany dia azo lazaina fa izany no izy iray amin'ireo tanàna manintona indrindra ao Tenerife.
2 Fizahan-tany Garachico
Ny tanana dia naorina tamin'ny 1496 avy amin'ny tanan'ny banky Genoazy atao hoe Cristóbal de Ponte. Taty aoriana dia namolavola ny seranana manan-danja izay nialan'izy ireo, mampifandray an'i Amerika sy Eropa amin'ny divay sy siramamy, sambo maro.
Ny fipoahan'ny volkano dia tsy ny zava-doza ihany tao an-tanàna satria tamin'ny taon-jato teo aloha dia nisy fahafatesan'olona nahafaty olona zato ary nilentika am-polony am-polony ny ranomasina, nefa tsy isalasalana fa hanova ny tantaran'ny tanàna mandrakizay ilay volokano. Saika ny tanàna manontolo no nandrasan'i Lava sy nanarona ny seranana ka nifarana ny taonan'ny varotra nefa ... io lava io ihany no noravany koa dia nanangana zava-baovao: puddles, dobo voajanahary.
Ankehitriny dia fantatra amin'ny anarana hoe Ny Caleton ary manintona mpizahatany sy mpizahatany. Izy ireo, miaraka amin'ny tanàna taloha, ny arabe misy vato, ny tranobe sy ny fiangonana taloha, dia manao an'i Garachico ho toerana mahafinaritra sy mahafinaritra hitsidihana an'i Tenerife.
Garachico dia manana hazo kesika maro, faritra volkano ary hantsana manasaraka ny manodidina ny tanàna sy ny afovoan-tantara. Ho an'ireo arabe manan-tantara dia ny taona 1994 no nanambarana azy Fananana tombotsoan'ny kolotsaina ary hatramin'ny taloha, nanomboka ny 1916, dia Villa y Puerto izany, araka ny baikon'ny Mpanjaka Alfonso XIII.
Andao hiresaka ny Manintona an'i Garachico. Tamin'ny voalohany dia nilaza izahay fa manana tranobe manan-tantara io, ka eo amin'izy ireo dia azontsika atao ny manome anarana hoe Tranon'i Ponto, tranobe manintona sy volomboasary an'ny an'ny fianakaviana mpanorina ny tanàna. Nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy io ary na dia may aza ny afo dia naorina indray izy io ary hotely androany ka afaka mijanona ao ianao.
La House of the Mills Tsy inona izany fa ilay milina fanaovana lafarinina sisa tavela eo afovoan-tanàna. Tsy mora jerena izany, lasa somary tsy voamarika izany satria tsy amin'ny ambaratonga an-dalambe izy io fa ambany kely kokoa, fa raha tianao ny valisoa dia afaka mandeha an-tongotra ianao satria mitazona fampirantiana momba io lohahevitra io. Betsaka ny fikosoham-bary, eny, saingy nanjavona tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
La Trano misy ny lapa ao La Gomera, fantatra ihany koa amin'ny hoe Stone House, dia manana ny endriny manontolo amin'ny vaton-kazo fotsy sy varavarana hazo tsara tarehy. Naorina teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX izy io ary tsy maintsy namboarina taorian'ny nipoahan'ny volkano. ny Trano an'ny Marques de la Quinta Roja Tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX ary avy eo ny marquis voalohany no nanova azy. Tany an-tranon'ireo masera Franciscan taloha izy io ary ankehitriny dia trano fandraisam-bahiny avy any ambanivohitra.
Trano manan-tantara iray hafa dia ny Castillo Fortaleza San Miguel, Nasainy namboarin'ny Mpanjaka Felipe II tamin'ny 1575, ho fiarovana amin'ny fanafihana mety hitranga. Trano iray mahazaka ny fanafihan'ny lava dia ny Conventists Franciscan Conceptionists tamin'ny taona 1643. Nandresy afo sy tafio-drivotra an-dranomasina koa izy tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Io no trano fivarotana monja ao Garachico sisa velona mandraka androany.
Ny fananganana toetra ara-pivavahana iray hafa dia ny Convent Dominikana Santo Domingo. Voavonjy tamin'ny fahatezeran'ny volkano tamin'ny toerany izy io ka tsy mitongilana, miaraka amin'ireo lavarangana. Androany dia miasa ho tranombakoky ny zavakanto ankehitriny izy io, ary koa ny efitrano malalaky ny tanàna ary trano ho an'ny zokiolona. Misy koa ny Fiangonan'i Santa Ana ary ny Hermasan'i San Roque.
Ho fanampin'ireo harena ara-javakanto sy ara-tantara, ankehitriny ny olona tonga ao Garachico manintona ny doboany, ny dobo, ny dobo voajanahary. Ilay antsoina hoe El Caletón. Ity toerana amoron-tsiraka manokana ity izay ampiasaina ankehitriny dia noforonina tamin'ny fipoahan'ny volokano tamin'ny taona 1706. Rehefa nandao ny tanàna ny lava dia nanohy ny diany mankamin'ny ranomasina ary rehefa tonga tany izy dia namorona ireo dobo voajanahary ireo tamin'ny endrika tsy dia mahazatra sy mahatsikaiky.
Amin'ny fahavaratra dia mameno mpizahatany izay afa-mandositra ny hafanana izy ireo. Milamina ny ranony amin'ny ankapobeny fa mbola ranomasina izy ka raha misosa ny ranomasina dia mila mitandrina ianao amin'ny onja mahagaga. Vantany vao vita ny mandroboka ianao ary mankafy ny rano dia azonao andramana ilay gastronomy eo an-toerana mifototra amin'ny trondro izay atolotra amin'ny trano fisakafoanana maro ao amin'ny faritra. Trondro sy ovy eo an-toerana al mojo, lovia tsara indrindra.
Amin'ny fahavaratra dia nanjary nalaza be i Garachico, fa io koa rehefa misy antoko eo an-toerana toy ny San Roque, ny fivahinianana masina izay atao amin'ny 16 Aogositra, iray amin'ireo malaza indrindra ao amin'ny Nosy Canary. Misy koa ny Festivities mamirapiratra ho fanomezam-boninahitra an'i Kristy Tompon'ny famindram-po, izay voalamina isaky ny dimy taona, izay voaravaka voninkazo taratasy ny arabe ary misy fitsangantsanganana mamaky ny arabe. Ireo fety ireo dia eo anelanelan'ny 31 Jolay sy 1 Aogositra ary ny fotoana manandanja indrindra dia ny Fuegos del Risco.
Ny manaraka Afon'ny Risco Ao amin'ny 2020 izy ireo ary raha te hahita zavatra mahafinaritra ianao dia aza hadinoina izy ireo satria ny mponin'i Garachico dia manipy afomanga avy eo an-tampon'ny vatolampy. Ireo baolina ireo dia manaraka ny lalana narahin'ny lava avy tao amin'ny volkano ka hatramin'ny ranomasina tamin'ny taona 1706. Io no fomba hankalazana na hahatsiarovantsika fa ny zava-doza dia lasa manintona mpizahatany ao an-tanàna.
"Mirehareha amin'ny fitsapana", izay no teny filamatr'i Garachico, ary rehefa nandany andro roa teto dia takatra izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Tenerife » Garachico, voina ary fizahan-tany
Ny zavatra jerena ao Valldemossa, Mallorca
Fragas do Eume, ilay ala Atlantika Galisiana